Iindaba eNigeria kunye nokuNgaphaya: uStephanie Coker weValentine yeSpecial + Okungakumbi
I-Rave News Digest: I-Stephanie Coker Ifumana izipho ze-XNUMX zosuku lweValentine, Iingcingo zika-Obasanjo zokuLondolozwa kweZilwanyana zasendle, uSalah + Okungakumbi
I-NYFW FW20: Jonga ukuKhangela kwesitrato esifanelekileyo
Su-tephanie Coker unesiphiwo i-XNUMX kusuku lweValentine, u-Obasanjo ufuna ulondolozo lwasendle, uSalah usenza isigqibo sokuba amele iGibhithe kwiiOlimpiki. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UStephanie Coker ufumana iVenkile yeGT Continental GT njengesipho seValentine
UStephanie Coker kunye nokukhwela kwakhe
Intombazana yeendaba, UStephanie Coker ungomnye wabona bantu bonwaba kakhulu emhlabeni ngelo xesha emva kokufumana iPartin Continental GT Coupe njengesipho seValentine.
Ubuntu beendaba buthathe iphepha lakhe le-Instagram ngoLwesihlanu, nge-14 kaFebruwari 2020, apho abelana ngeefoto zakhe ezimnyama emotweni yakhe entsha. UStephanie Coker uqhubekile esiya kulatha umfanekiso kunye nesicatshulwa apho athe wasityhilela ukuba sisipho soMhla weValentine.
"Push Present Valentines Edition. Enkosi ❤, ” wabhala. Sivuyisana noStephanie Coker kwimoto yakhe entsha.
Okokugqibela xa intombazana yemithombo yeendaba yenza ibizz kakhulu kwimidiya yoluntu xa kwatyhilwa ukuba yamkele umntwana nomyeni wakhe, I-Olumide Aderinokun.
2. I-Obasanjo ifuna ukuba kugcinwe izilwanyana zasendle
Owayengumongameli I-Olusegun Obasanjo Icele ukuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo eza kukhuthaza ukugcinwa kwezilwanyana zasendle kweli lizwe. U-Obasanjo wakhala ngelithi uninzi lwasendle olunokuthi luzuze eNigeria lwathunyelwa kwamanye amazwe.
Umongameli wangaphambili utshilo oku ngoLwesine ngelixa ebethetha namalungu ePangolin Conservation Guild of Nigeria kwindawo yakhe yokuhlala kwiLayibrari kaMongameli yase-Olusegun Obasanjo, e-Abeokuta, eOgun State.
Abalondolozi bahlanganisana ukubhiyozela uSuku lweHlabathi lwePangolin lweHlabathi le-2020 kunye noMongameli wangaphambili. U-Obasanjo walila ngezinga eliphezulu lokukhuphela isikali se-pangolin (isilwanyana eside kunye nesikhumba esigciniweyo) ukusuka eNigeria kuye eChina.
Ucele amaNigeria ukuba agcinele izilwanyana zasendle kweli lizwe, kunokuba zikhuphe amanye amazwe. U-Obasanjo, ukhuthaze abo babandakanyekayo kushishino lwezilwanyana ukuba baqhubeke nokwazisa ngezibonelelo zokulondolozwa kwendalo.
3. Imvumi yeVangeli ibanjiwe izama ukubaleka eRwanda
Imvumi yaseRwanda ephikisayo Kizito Mihigo ubanjiwe ngamapolisa ngesityholo sokuzama ukushiya ilizwe ngokungekho mthethweni. Imvumi yevangeli, eyaziwa ngegama lakhe lokuqala uKizito, iyanqunyulwa ukuba ishiye iRwanda ngaphandle kwemvume ngenxa yokugwetywa kwangaphambili.
Amapolisa athi uza kubekwa ityala lokunyotywa nokuzama ukuphuma elizweni ngenjongo zokuya kwiqela lemvukelo.
Kwiminyaka emihlanu eyadlulayo uKizito wagwetywa iminyaka elishumi ejele emva kokugwetywa ngokuceba ukubulala uMongameli Paul Kagame nokukhuthaza intiyo ngakuRhulumente. Waxolelwa ngumongameli ngonyaka ka-2018 kwi-conditionn ethi ulishiya ilizwe kuphela ngemvume.
4. I-US ivisa utyelelo lwentloko yomkhosi waseSri Lanka ngenxa yolwaphulo-mthetho lwemfazwe
I-United States ithi ngolwesihlanu iyakwala ukungena kwinkosi yomkhosi waseSri Lanka ngenxa yobungqina “obunokuthenjwa” bokunyhashwa kwamalungelo abantu kwityala lamagazi lowe-2009 kwimfazwe yamakhaya.
ULieutenant General UShavendra Silva, ekutyunjweni kwakhe kulo nyaka uphelileyo ukugxeka ngokubanzi amazwe aphesheya, akasayi kufaneleka ukuba atyelele e-United States, njengoko kuyakwenza nosapho lwakhe, Unobhala Wezwe. Mike Pompeo sitsho.
USilva wayengumphathi-mkhosi wecandelo lamajoni elalihlala kwimpuma yesiqithi kwinyanga zokugqibela zomkhosi oxhobileyo ngokuchasene nabavukeli baseTamil Tiger ngo-2009. Amaqela amalungelo athi amaTamils ​​angama-40,000 ohlanga abulawa kwizenzo zenkohlakalo njengoko imikhosi yaseburhulumenteni ibambe iSri Lanka. IsiTamil emantla.
U-Pompeo ukanti wathi i-United States inethemba lokugcina intsebenziswano yezokhuseleko neSri Lanka, kunyaka ophelileyo yanyikiswa ziibhombu zeCawa ze-Ista ngabashosisi abangamaSilamsi.
5. U-Mohamed Salah: I-Liverpool ifuna ulwazi oluthe kratya malunga neeOlimpiki, utshilo uJurgen Klopp
USalah unokumela iJiphutha njengomnye wabadlali abathathu abangaphezulu kweminyaka
Umphathi weLiverpool Jurgen Klopp ithi iklabhu idinga ulwazi ngakumbi ngaphambi kokuba ithathe isigqibo sokuba iya phambili na Mohamed Salah angayimela i-Olimpiki kwiiOlimpiki. Ukhuphiswano lwenzelwe amaqela angaphantsi kweminyaka engama-23 kodwa abadlali abathathu abaneminyaka engaphezu kwexesha bavumelekile.
USalah, oneminyaka engama-27 ubudala, ukoluhlu lwe-50 lwamadoda angama-8 lomsitho, oza kuba ugqibe ngomhla we-2020 ku-Agasti-umhla wokuqala we-21-XNUMX yePremier League. I-Fifa ngaphambili ivume ukuba iiklabhu azinyanzelekanga ukuba zikhulule abadlali abangaphezulu kweminyaka kwiMidlalo eTokyo, kunye nomqeqeshi wase-Egypt NguShawky Gharib uthi isigqibo yiLiverpool.
U-Klopp uthi akukho mntu unxibelelane neklabhu malunga nokuthatha inxaxheba kukaSalah kwaye ingxoxo yakhe isemagqabini.
iindaba zokuzonwabisa Okufumaneka iindaba zehlabathi iindaba zamanye amazwe iindaba zesizwe iindaba zemidlalo iindaba zehlabathi
Uhlobo Rave Februwari 14, 2020
IMafikizolo, Akon, Korede Bello kunye nezinye iingoma ezihambelana neAfrikaans kufuneka uzibambe